Madaxda Dowlad goboleedyada oo shir fogaan arag ah yeeshay - Idman news
Warar Horseed Media heshey ayaa sheegaya in habeenkii xalay shir loo adeegsadey aaladda Internetka uu dhexmaray Madaxweynyaasha Dowlad goboleedyada dalka ee kala ah Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed Jubaland iyo Puntland.
Shirkan ayaa daba socdey shir Wakiilada beesha Caalamka ee Soomaaliyaay la yeesheen Madaxda Jubaland, Galmudug iyo Puntland iyaga oo horey u booqdey Koonfur Galbeed, waxaana ay ku booriyeen in laga gudbo caqabadaha ku gadaaman in la fuliyo heshiiskii September 2020 lagu gaarey Muqdisho, iyada oo aan heshiiska waxba laga beddeleyn.
Saddexda Dowlad goboleed ee Galmudug Hir-shabelle iyo KG ayaa ku adkeysanaya in ay qabanayaan doorashada oo ay fulinayaan heshiiskii September 2020 haddii aan xal la gaarin shanta maalmood ee soo aadan.
Horseed Media uma suurta gelin in ay xaqiijiso in la isla qaatey doontitaanka Deni iyo Madoobe ee ku aadan in la isugu yimaado shir kale oo lagu xalinaayo caqabadaha jira, inkasta oo Beesha Caalamku ay mowqif kaas ku dhaw dalabatey oo ah in la isu yimaado oo la isu tanaasulo.
Previous Al-Shabaab oo soo buux dhaafiyey deegaano ka tirsan Shabeellada Dhexe
Next Yaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxyada lagu hoobtay ee ka dhacay Baqdaad?